Waxqabadka Dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay (Sawirro) – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
On Apr 18, 2015 Last updated Apr 18, 2015
Mogadishu, 18 April 2015 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Qabqabasho iyo Xukunno lagu fuliyey denbiilayaal ka tirsan argagixsada Al-Shabaab, Qorshe Howleedka Baarlamaanka oo la diyaariyey, Shirka Maamul u Sameynta Gobollada Dhexe oo furmay, Imtixaan Qaran oo laga hirgelinayo Soomaaliya, Dowladda Federaalka iyo Puntland oo mideeyey aragtidooda dhameystirka federaalaynta dalka iyo xoojinta hay’adaha dawladda, Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo taageero u raadinaya xukuumadiisa ayaa guul kala soo kulmay safarkii uu ku tegay UAE iyo Shir Wadatashi ee siyaasada Dhalinyarada iyo Cayaaraha oo lagu qabtay Muqdisho.
Qabqabasho iyo Xukunno lagu fuliyey denbiilayaal ka tirsan argagixsada Al-Shabaab
Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidanka Qalabka sida ayaa 15kii April 2015 waxey xukunno ku riday 7 xubnood oo ka tirsan kooxda Argagixisada ah ee UGUS kuwaas oo maxkamdu sheegtay in ay qirteen Dambiyada Xeer ilaalinta maxkamadu ku soo eedeysay waxaana xukunada yihiin xabsi waqtiyo kala duwan ah. Kaaliyaha Maxkamada Ciidanka qalabka sida Gaashaanle dhexe Xasan Cabdi raxmaan Aadan ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamada kooxdaas argagixisada ah oo ciidamada amaanku ay soo qabteeen iyagoo dhibaatada bulshada Muslimka ah ee Soomaaliyeed ka shaqeynaya ayaa waxaa lagu kala xukumay xabsiyo 10 sanno ilaa 5 sanno u dhaxeeya. Shaqsiyaadka xukunnada lagu kala riday ayaa magacyadoodu kala yihiin: Cabdi raxmaan Axmed Afrax, Cabdi raxmaan Muqtaar Caamir, Cabdi naasir Aadan Caynte, Cabdulaahi Xersi Maxamed, Maxamed Xasan Cali, Maxamed Cabdi Yuusuf, iyo Maxamed Deeq Cabdul qaadir Fiidow. Dowladda Federaalka ayaa in muddo ahba waday nabadeynta iyo xasilinta dalka, oo xukunnadan lagu riday dambiilayaasha ay marqaati u tahay in qof dambiile ah uusan fakan doonin, lana rajeynayo inay tusaale u noqoo danbiilayaasha si ay u joojiyaan danbiyada ay geysanayaan.
Qorshe Howleedka Baarlamaanka oo la diyaariyey
Guddoonka Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay inay 15kii April 2015 Xukuumadda u gudbiyeen Qorshe Howleedka Baarlamaanka uu ku shaqeyn doono kalfadhiyada soo socda, si loo dar dar geliyo wada shaqeynta ka dhexeysa labada gole. Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa yiri “Xukuumadda waxaan u bandhignay habka u shaqeyn doono Baarlamaanka kalfadhiyada 6aad, 7aad iyo kan 8aad, si aan isla jaan qaadi karno, waxyaabaha ay u baahanyihiin in loo meelmariyo oo ay soo kala hor mariyaan kuwa ahmiyadda u leh, waqtiga haray ma badna, waqtiga wuu yaryahay, in loo xoojiyo wada shaqeynta labada gole, in sidoo kale wadatashiga hay’adaha kale lala yeesho, sida culimaa’udiinka iyo qeybaha bulshada” ayuu yiri Prof Jawaari. Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa xusay in tani ay tahay nidaam cusub oo ku saabsan in labada gole ay isla jaan qaadaan oo ay meesha ka baxdo is qab qabsi, isla markaana si wada jir ah loogu shaqeeyo danaha danta guud ee dalka.
Shirka Maamul u Sameynta Gobollada Dhexe oo furmay
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa si rasmi ah u furay 16kii April Shirka Maamul u Sameynta Gobollada Dhexe. Madaxweynaha ayaa Cadaado gaaray 14kii April 2015 si uu u dhiiri geliyo dadka deegaanka inay sameystaan maamul loo dhan yahay oo rabitaanka shacabka deegaanka ku yimid. Madaxweynaha ayaa dhowr jeer socdaalo ku kala bixiyey gobollada dhexe isagoo muujinayo sida uu u doonayo in dadka deegaanka ay sameystaan Maamul Goboleed matali kara shacabka deegaanka. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si diirran ugu soo dhoweeyay magaalada Cadaado Madaxda degaanka iyo dadweyne fara badan oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cabdiraxmaan Odowaa, oo hoggaaminayay wafdiga hordhaca ah ee ka horreeyay wafdiga Madaxweynaha. Furtitaanka shirka waxaa goob joog ka ahaa mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, Odayaal Siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin. Madaxweynaha Soomaaliya oo furitaanka shirka khudbad dheer ka jeediyay ayaa bogaadiyay dadaaladii loo soo galay in shirka uu maanta furmo waxaana uu sheegay in shirkan uu socon doono muddo 45 cisho ah isagoo odayaasha deegaanka ugu baaqay in ay shirkan ka soo saaraan wax ay isku waafaqsan yihiin.
Imtixaan Qaran oo laga hirgelinayo Soomaaliya
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ayaa 13kii April 2015 isku waafaqay in hal mar dalka oo dhan laga qaado imtixaan Qaran, isla markaana Arday kasta oo imtixaanka ka qeyb qaadanaya uu buuxiyo Foomka Diiwaan gelinta Ardayda kaas oo ay wada meel mariyeen Wasaaradda iyo Dalladaha Ahliga ah ee inta badan gacanta ku haya Iskuulada sida gaarka ah loo leeyahay. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Prof Maxamed Abdulkadir Nuur ayaa sheegay in sanadkaan Wasaaradda ay ka go’antahay in ay qaaddo Imtixaan Qaran oo loo dhanyahay loogana baahan yahay Dhamaan dalladaha iyo Ardayda in ay u hoggaansamaan. Dowladda Federaalka ayaa in muddo ahba waday qorshe lagu tayeynayo waxbarashada dalka, tanoo qeyb ka ah sidii imtixaan Qaran loo qaadi lahaa, oo wax badan ka bedeli doonta nidaamka waxbarashada dalka.
Dowladda Federaalka iyo Puntland oo mideeyey aragtidooda dhameystirka federaalaynta dalka iyo xoojinta hay’adaha dawladda
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke ayaa booqasho ku tegey Puntland 10kii ilaa 12kii April 2015. Ujeedada booqashada ayaa aheyd sidii loo xoojin lahaa xiriirka Puntland iyo Dowladda Federaalka si loo dardargeliyo dhaqangelinta barnaamijka hiigsiga 2016ka. Kulan wada tashi iyo wada xaajood uu Ra’iisul Wasaare Cumar la yeeshay Madaxweynaha Puntland iyo maamulkiisa ayaa waxaa la isku raacay war-muurtiyeed qeexaya sida loogu baahan yahay in loo dardargeliyo dhaqangelinta barnaamijyada New Deal-ka, Dib u eegista dastuurka, iyo dimoqraadiyeynta dalka. Waxaana la isla gartay in heshiisyadii horey loo galay la dhaqangeliyo. Sidoo kale waxaa la isla gartay in loo diyaar garoobo shirka madasha wadatashiga Madaxda Sare ee Dowladda Federaalka iyo Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada. Dowladda Federaalka iyo Puntland oo mideeyey aragtidooda dhameystirka federaalaynta dalka iyo xoojinta hay’adaha dawladda. Labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay si toos ah iskaashi iyo wadashaqayn buuxda u yeeshaan wasaaradaha labada dhinac.
Dowladdaha Imaaraadka iyo Soomaaliya oo Iskaashigooda xoojinaya
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke oo safar shaqo ku tagay dalka Isku taga Imaaraadka Carabta (UAE). Ujeedada safarka ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii ay labada dal isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga, burcad-badeeda, dhismaha hay’adaha dowliga ah ee Soomaaliya iyo sidii mashaariic horumarineed looga fulin lahaa Soomaaliya. Ra’iisul Wasaaraha ayaa safarkiisa waxaa ku wehliyey wasiiro oo dhigooda dalka Imaaraadka kulamo la yeeshay kuna heshiiyey in iskaashi ballaaran uu dhex maro hay’adaha dowliga ah ee labada dal. Sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa Soomaaliya ka taageereysa sidii loo tayeyn lahaa ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.
Dowladda Federaalka oo tayeyneysa Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa ka qeybgalay xuska 55 guurada markii la aasaasay Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed (CXD) oo 12kii April 2015 lagu qabtay xarunta Wasaarada Gaashandhiga. Munaasabada xuska CXD ayaa lagu soo bandhigay waxqabadka CXD isla markaasna lagu dhiiri geliyey geesiyaasha ciidanka guulahii is-daba jooga ahaa oo ay ka soo hoyeen dagaalka lagula jiro kooxaha nabad-diidka ah. Ciidanka ayaa sanooyinkii la soo dhaafay lagu sameeyey dib u habeyn, isla markaasna tababaro fara badan loo fidiyey oo lagu tayeynayey ciidanka oo maanta si professional ah u dhaqma una dhowra xuquuqda bani’aadanka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Ciidanku waa lafdhabarka bulshada oo lagu ammaanay inay har iyo habeen difaacayaan shacabka Soomaaliyeed. Dowladda Federaalka ayaa wada dadaalo lagu tayeynayo ciidanka si ay mustaqbalka dhow ula wareegaan sugidda amniga dalka.
Shir Wadatashi ee siyaasada Dhalinyarada iyo Cayaaraha oo lagu qabtay Muqdisho
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasna ahaa Ku Simaha Madaxweynaha Mudane Maxamed Shiikh Cismaan “Jawaari” ayaa 16kii April 2015 furay shir wada tashi ah oo ay soo qaban qaabisay wasaarada Dhalinyarada iyo Isboortiga ee dowlada Federaalka Soomaaliya islamarkaana ay ka qeyb galeen dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo mas’uuliyiinta xiriirada isboortiga ee dalka. Wasiirka Dhalinyarada iyo Isboortiga Somaaliya Maxamed C/laahi Xasan “Nuux” ayaa soo dhaweeyay ka qeyb galayaasha shirka. Furitaankii shirkan wada tashiga ah ayaa waxaa hadalo ka jeediyay wasiirada ka socday dowlad goboleedyada ka jira dalka oo ay ka mid ahaayeen wasiirka Isboortiga, Dhalinyarada iyo shaqada iyo shaqaalaha ee Puntland C/raxmaan Axmed C/lle, Wasiirka Arrimaha bulshada ee Jubbaland Maxamed Ibraahim Maxamed iyo Wasiirka Isboortiga iyo Dhalinyarada ee Koonfur Galbeed C/laahi Cabdi Cumar Fanax. Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo si rasmi ah u furay shirkan wada tashiga ah ayaa ku baaqay in la sameeyo shir ay ka wada qeyb galayaan dhamaan dhalinyada Soomaaliyeed, isagoo ballan qaaday in Baarlamaanka uu meel marin doono waxyaabaha ka soo baxa shirkaasi.
Taliyihii Ciiddanka Milliteriga Kenya ee amray inay Ciiddankiisa gudaha u soo galaan Soomaaliya oo xilka laga qaaday
Cunug yar oo Somali ah oo ay Ciiddanka Badda Talyaaniga badbaadiyeen